Katiinado H&M ah oo aadan ka maqnaan karin xagaagan | Bezzia
Susana godoy | 17/06/2022 11:00 | Dhameystirka
Waxaan gaadhnay wakhtigaas sanadka oo dharku leeyahay qoor badan oo maqaarku uu yahay mid caan ah. Sidaa darteed, dhamaystirka qaabka silsiladaha sida kuwa H&M ay leeyihiin. Sababtoo ah xilli ciyaareedkan wax badan ayay qaataan, si aadan u awoodin inaad iska caabiso wax kasta oo aan kuu diyaarinay.
Ururinta fikradaha iyo dhamaystirka kuwaas oo siinaya nolosha muuqaalkaaga ugu fiican. Waa waqtigii sharad ku saabsan fikradaha ugu asalka ah oo soo saara dhadhankayaga ugu fiican. Sidan oo kale, muuqaal kasta oo aan xidhno waxay sidoo kale siinaysaa taabashada shakhsi ahaaneed ee aan aad u jecelnahay. Kaliya waa inaad doorataa naqshadda aad jeceshahay.
1 Katiinado saddex-geesood ah oo H&M ah
2 Katiinad dahab ah oo ubaxyo yaryar leh
3 Furaha saddex-geesoodka ah iyo daboolka daboolka
4 'Saxiibada ugu Wanaagsan'
5 silsilado luul ah
Katiinado saddex-geesood ah oo H&M ah
Mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee xilli-ciyaareedka waa kan. Waa silsilad saddex xadhig ah.. Sababtoo ah isku-darka pendants had iyo jeer waa beddel weyn si loo siiyo asal badan muuqaal kasta oo aan xidhno. Laakiin kiiskan, isku-dhafkan maahan lagama maarmaan sababtoo ah silsiladdu runtii waxay leedahay saddex wareeg oo wadajir ah. Markaa, mid kastaa wuxuu leeyahay dhammaystir gaar ah. Midka ugu dheer wuxuu ka kooban yahay silsilad aad u fiican oo bilad yar wadata. Halka kan labaadna aanu ka helno kubbado yaryar oo taxane ah oo qurxin si ay ugu dhameeyaan silsilad xiriirin waaweyn. Shaki la'aan, doorasho aad u fiican si loo siiyo asalka qaabkeena.
Katiinad dahab ah oo ubaxyo yaryar leh
Waxay u muuqataa in taabashada dahabiga ah ay tahay mid ka mid ah jilayaasha waaweyn ee xilli ciyaareedka. Inkasta oo haddii aad jeceshahay qalinka, waxaad sidoo kale yeelan doontaa silsiladahaaga dhamaadkaas. Waqtigan xaadirka ah waxaan la joognaa kuwa ugu horreeya laakiin qaab ceejis ah. Mid kale oo ka mid ah fursadaha aasaasiga ah marka aan ka hadalno qalabka. Markaa, ma jiraan wax la mid ah in qoorta lagu qurxiyo dhaldhalaalkaas dahabiga ah oo lagu dhammaystiro kuulyo yaryar oo isku xiga sida ubax. Habka ugu quruxda badan ayaa noqon doona midka ku weheliya mahadsanid fikrad sidan oo kale ah. Ku fiican shumaca-gacantaada laakiin sidoo kale dharka xagaaga ugu quruxda badan.
Furaha saddex-geesoodka ah iyo daboolka daboolka
Waxaan ku sii wadnaa midabka dahabka ah iyo mid ka mid ah kuwa dhameystiran ee aan jecelnahay. Waa saamaynta saddexlaha ah ee mar kale taagan. Inkasta oo kiiskan, waxaan ogaanay in silsiladaha laftooda ay ka soo jeedaan xiriiriyeyaasha aadka u fiican ee kuwa kale ee nooca duuban, kuwaas oo asal ahaan asal ah. Laakiin asal ahaan, waxaan leenahay furaha iyo qufulka labadaba. Laba tafaasiil oo kaamil ah oo aan horeba u naqaannay ayaa si fiican isu dhammaystiraya oo hadda waxay samayn doonaan xitaa wax badan oo qoorta ah.
'Saxiibada ugu Wanaagsan'
Haddii aad rabto inaad sameyso hadiyad xagaaga wanaagsan oo socon doonta nolosha, markaa waxaad haysataa mid kale oo ka mid ah silsiladaha aad sidoo kale jeclaan doonto, iyo wax badan. Sababtoo ah saaxiibo wanaagsan ayaa had iyo jeer muhiim u ah nolosheenna. Sidaa darteed, haddii aan sidoo kale had iyo jeer u xiran karno sida canshuurta qoorta, xitaa ka sii fiican. Waa xadhig leh qalbi qurux badan oo ereyada 'Saxiibada ugu Wanaagsan' ay yihiin jilayaasha isku mid ah. Sidaa darteed, waxaad qaadan kartaa mid iyo saaxiibkaa ama saaxiibka ugu fiican, dhinaca kale. Ha la ogaado inaad dareento isku mid ah!
Waxay u muuqataa in aan ka hadlayno saddex silsiladood mar kale, laba ka mid ah ayaa la mid ah laakiin tan saddexaad waxay noqon doontaa fikrad cusub oo aad jeclaan doonto. Sababtoo ah marka laga soo tago in labada isku midka ah ay ka kooban yihiin qalbi jaban oo ay ka buuxaan zircons, aragtidu waxay u socotaa khilaafka saddexaad ee ah oo ka kooban luul yar oo taxane ah. Shaki la'aan, dadku waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican iyo sida aan aragno, marnaba kama baxdo qaabka. Markaa waa inaan xisaabta ku darnaa. Habka iyo asalka ayaa ka iftiimin doona qoortaada. Katiinado kee baad jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Dhameystirka » isku darka silsiladaha H&M ee aanad seegi karin